AbakwaDisney bathembisa ukuthi ipulatifomu yayo izoshibha kuneNetflix | Izindaba zamagajethi
IDisney imemezele ukuthi izoshiya iNetflix kungekudala (ESpain, empeleni, ukuba khona kwabo kungubufakazi nje ngoba amalungelo ahlanganiswa ngomunye umkhiqizi). Nakhu lesi sidlakela sezokungcebeleka sixwayise ngokuthi manje sihlela ukusungula inkundla yaso yokuzijabulisa yokuqukethwe okudingwayo, okwamanje sigcina ithrekhi yezindaba ngayinye kulokhu.
Namuhla i-CEO yayo yamanje yazise izindaba ezibalulekile nje, ipulatifomu yokuqukethwe okudingwayo izobe ishibhile kuneNetflix. Kuyathakazelisa ukuthi lolu lwazi luvela emasontweni ambalwa ngemuva kokuthi iNetflix inyuse ngokusemthethweni izindleko zenkonzo yayo kwamanye amazwe, kufaka phakathi iSpain, yize ukukhuphuka bekuphansi impela.
Kodwa-ke, asikaze siqalise amarokhethi okwamanje, okunengqondo impela uma sibheka ukuthi okwamanje iDisney ayinabo abaqaphi bayo bakuthelevishini, ngenkathi INetflix inabalingisi bokuqukethwe bekhwalithi njenge Izimpawu ezingajwayelekile y House of Cards eziheha izigidi zabasebenzisi kwipulatifomu yayo, kanye nokuqukethwe okuningi okuvela kwamanye amafemu. Ngenkathi kubonakala sengathi iDisney okwamanje kuzofanele inamathele kokuqukethwe ekuqukethe ngamalungelo ayo. Lokhu kwephuka kwemisebenzi edingeka kakhulu kudala umonakalo emaphaketheni abasebenzisi.
Icebo lethu ukukwenza ngentengo ibe ngaphansi kwezindleko zamanje zokubhaliselwe kweNetflix, inhloso yethu lapha ukuthi sibe ngumdlali osebenzayo esikhaleni esiqonde ngqo kubathengi, isikhala sonke esaziyo ukuthi siyindawo ekhangayo kakhulu.
Sikholelwa futhi ukuthi ama-brand ethu nama-franchise ethu abalulekile ngempela, njengoba sibonile kuyo yonke iNetflix nakuwo wonke amanye amapulatifomu.
Lokho kufanele ukhokhe i-HBO ngoba ufuna ukubona Umdlalo Wamakhosi, ngenkathi ukubona Isihambi Izinto kufanele ngidlule ebhokisini leNetflix kunzima, futhi manje ijoyina iDisney, engeke ithathe ngqo omncane kunabo bonke endlini, ngoba inamalungelo phakathi kweminye imikhiqizo eminingi yabantu abadala, akukho okunye futhi akukho okungaphansi kwalokho Izimpi Zenkanyezi
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » IDisney ithembisa ukuthi ipulatifomu yayo izoshibha kuneNetflix